-Dhacdo Jumlo LED UFO iftiin, RAD-CL504, Kiiska aluminium-ka-dhimista + muraayad adag, 85-265V Darawal, Soo saaraha iyo Soo-saare dammaanad 3 sano ah |Radlux
Iftiin UFO LED, RAD-CL504, Kiis aluminium ah oo shubaya + muraayad adag, Darawal 85-265V, Dammaanad 3 sano ah
*Tilmaanta & Codsiga:
Nalka RAD-CL504 wuxuu ku dhexjiraa naqshad isku dhafan oo dhuuban, darawalka LED wuxuu ku xiran yahay gudaha sare ee iftiinka.Guryuhu waxay ka samaysan yihiin aluminium-ka-dhimatay, oo leh hawl-qabad kulaylka oo aad u fiican.Dhererka 15cm ee fiilada dibadda ah si fudud loogu xiro koronto.Ku habboon codsiyada dibadda iyo gudaha, Kaalinta Shidaalka, Bakhaarka, Garoonka…
1, Guryaha aluminium-ka-saarista, daadinta kulaylka wanaagsan.
3, Heer sare leh 3 sano oo dammaanad ah, nolol dheer> 50000hrs
Alaabooyinka waxaa si weyn loogu isticmaalaa dhismaha, aqoon-is-weydaarsiga warshadaha ama bakhaarka, saldhigga shidaalka, suuqa ganacsiga, hoolka bandhigga, garoomada, jardiinooyinka iwm.
* Baakaynta iyo Rarista:
Caadi ahaan RAD-CL504 waxaa lagu soo raray kartoon warqad bunni ah. Sanduuqa cad iyo sanduuqa midabka ayaa sidoo kale la heli karaa haddii loo baahdo.
Sariiraha alwaaxyada dheeriga ah ama balaastigga ayaa lagu shubi karaa kartoonnada.
* Bixinta iyo Bixinta:
Caadi ahaan wakhtiga keenista waa 45 maalmood ka dib lacag bixinta hormariska ah ama nuqul L/C ah oo la helay.T/Tand L/C marka la eego waa shuruudaha lacag bixinta ee la aqbalay.
* Dhoofinta ugu Weyn iyo Suuqyada:
Waqtigan xaadirka ah, waa inaan u dhoofinnaa alaabtan macaamiil badan kuwaas oo ah qaybiyaha nalalka dibadda ee xirfadlayaasha ah, projector iyo saarayaasha dalal kala duwan, sida Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Venezuela, South Africa, Masar ... iwm.
Bixi qiimayaal tartan ah.
Bixi dammaanad 3 sano ah, waxqabad cajiib ah, tayada sare;
Si fudud loo rakibo, badbaadin qiimaha shaqada ee rakibidda;
Cilladaha wax soo saarka, waxaanu bedeli doonaa qaybaha ama alaabta oo dhan.
Hore: Iftiin UFO LED, RAD-CL503, Kiis aluminium ah oo shubaya + muraayad adag, Darawal 85-265V, Dammaanad 3 sano ah
Xiga: Iftiinka tunnel LED, RAD-TL601, Kiiska aluminium-ka-dhimista + muraayadaha PC, Darawalka 85-265V goonida ah, 4000V ilaalinta hillaaca, 3 sano damaanad
Nalalka gaaska Canopy Led
Iftiinka Canopy ee Led ee Bakhaarka
LED UFO iftiinka, RAD-CL503, aluminium-ka-dhimatay ...
LED Canopy Light, RAD-CL501, aluminium-ka-dhibista
LED Canopy Light, RAD-CL502, aluminium-ka-dhibista